Steam | January 2020
Ighapu enyi na Steam
Otu n'ime nsogbu nkịtị nke onye ọrụ nwere ike ihu na usoro bụ imeghe enyi. O nwere ike ịbụ na ị kwụsịrị onye ọrụ uzo Steam ọzọ, na ya na ya kparịtara ụka, ma ka oge na-aga, edoziwo mmekọrịta gị, ịchọrọ ịlaghachi ya na ndetu enyi gị. Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo Steam amaghị otu esi emeghe otu enyi.
Ntughari okwu na Steam
Usoro mgbanwe nke oge ọ bụla nwere ike ime ka nchekwa nke akaụntụ ọ bụla dịkwuo mma. Nke a bụ n'ihi na ndị omempụ na-enweta ohere na nchekwa data paswọọdụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gaghị esiri ha ike ịbanye n'ime akaụntụ ọ bụla na ime ihe ọjọọ ha. Mgbanwe mgbanwe dị mkpa, ma ọ bụrụ na ị jiri otu paswọọdụ dị iche iche - dịka ọmụmaatụ, na netwọk mmekọrịta na Steam.
Anyị na-ewepụ ekwentị nke Steam
Taa, Steam na-enye ọtụtụ ụzọ iji kpuchie akaụntụ gị. Na mgbakwunye na nbanye nbanye na paswọọdụ dị na Steam enwere ihe mgbakwunye nke ngwaike kọmputa. N'ihi nke a, mgbe ị na-agbalị ịbanye na akaụntụ Steam site na kọmputa ọzọ, onye ọrụ ga-achọ ikwenye ma ọ bụ onye nwe profaịlụ a.
Adreesị ebe obibi na Steam. Kedu ihe ọ bụ
Na Steam enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche isi akwụ ụgwọ maka egwuregwu na fanye. Ọ bụrụ na tupu ihe niile ejedebe na ịzụ na kaadị akwụmụgwọ, taa ị nwere ike iji ihe ọ bụla ụgwọ ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, ịzụta egwuregwu na Steam, ịnwere ike iji usoro ntanetị ndị dị otú ahụ dị ka WebMoney ma ọ bụ QIWI.
Otu esi edebanye aha na Steam
Iji nweta egwuregwu na Steam, kparịta ụka na ndị enyi, nata akụkọ ọhụrụ egwu egwu, ma, n'ezie, kpọọ egwuregwu kachasị amasị gị ịdebanye aha. Mepụta akaụntụ ọhụrụ Steam naanị ma ọ bụrụ na ị debanye aha tupu. Ọ bụrụ na i meela profaịlụ, egwuregwu niile dị na ya ga-adị na ya.
Paswọdu naghachi na Steam
Steam bụ usoro nke na-enye gị ohere ịnweta atụmatụ pụrụ iche maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ. Iji dee onye ọrụ, ụyọkọ nbanye + paswọọdụ eji. Mgbe ịbanye na akaụntụ gị, onye ọrụ ga-abanye nchikota a. Ọ bụrụ na enweghi nsogbu na nbanye, mgbe ahụ nsogbu na paswọọdụ bụ ihe nkịtị.
Steam, dị ka ngwaahịa ọ bụla ọzọ, chọrọ mmelite oge. Ịkwalite ya na nwelite ọ bụla, ndị mmepe dozie mkpọchi na gbakwunye atụmatụ ọhụrụ. Ngwurugwu ntanetị nke ọma na-eme na akpaghị aka na mbido ọ bụla. Otú ọ dị, enwere ike inwe nsogbu na mmelite ahụ.
Ihe mere Steam nwere ike ghara itinye
Steam bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mma, na-enye gị ohere igwu egwu na ndị enyi na ikarịta ụka na ịme egwuregwu na isiokwu ndị ọzọ na ịntanetị. Mana ndi oru ohuru nwere ike izute nsogbu ugbua mgbe ha na etinye usoro a. Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na anaghị etinye Steam na kọmputa gị - gụọ banyere ya n'ihu. Enwere ọtụtụ ihe mere steam nwere ike ịkwụsị usoro nrụnye ahụ.
Steam adịghị ahụ Intanet. Ihe ị ga-eme
Ọ dịkarịghị, ndị ọrụ Steam na-eche nsogbu mgbe enwere njikọ Ịntanetị, ihe nchọgharị na-arụ ọrụ, ma onye ahịa Steam adịghị ebuba peeji ma dee na enweghị njikọ. Ọtụtụ mgbe, njehie a gosipụtara mgbe imelite onye ahịa ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya n'ihe kpatara nsogbu ahụ na otu esi edozie ha.
Otu esi eme ka a na-enye mgbanwe na Steam
Steam nwere ọtụtụ njirimara nke nwere ike imeju ọ bụla onye ọrụ nke ọrụ a. Na mgbakwunye na ọrụ ndị mbụ ịzụrụ na ịmalite egwuregwu, ịkwurịta okwu, ịtọcha ihuenyo maka nyochaa n'ozuzu, enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ na Steam. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwere ihe dị n'akpa gị na ndị ọrụ ndị ọzọ nke usoro.
Otu esi agbanwe nọmba ekwentị na Steam
Ụfọdụ ndị ọrụ Steam jiri Steam Mobile Authenticator, nke na-enye gị ohere iwelie nchekwa nke akaụntụ gị. Nchekwa Steam bụ nchekwa nke akaụntụ Steam na ekwentị ahụ, ma ị nwere ike ịbanye n'ọnọdụ ebe nọmba ekwentị furu efu ma n'otu oge ahụ a jikọtara nọmba a na akaụntụ ahụ.
Ịzụta egwuregwu na Steam
Taa, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọrụ na-esonyere ịzụta nke egwuregwu, ihe nkiri na egwu site na Ịntanetị. N'adịghị ka ịga ụlọ ahịa maka ụgbọala, ịzụta ịntanetị ga-ewepụta oge. Ọbụna ị gaghị ebili si n'ihe ndina. Naanị pịa bọtịnụ ole na ole ma nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu ma ọ bụ ihe nkiri gị kacha amasị.
Code na-ezighi ezi si Nche Nchebe SMS
A chọrọ Nchebe Steam iji mee ka nchekwa nchekwa akaụntụ Steam. N'okpuru nhọrọ mbụ ị na-abanye na akaụntụ gị, naanị ị chọrọ ịbanye nbanye na paswọọdụ gị. Ọ bụrụ na ị na-eji Nchebe Steam, mgbe ahụ ịbanye Steam ị ga-etinye koodu nkwenye nke na-eme na ngwaọrụ mkpanaka gị na Nchebe Steam.
Gbanwee mpaghara na Steam
Ọtụtụ mmadụ gburugburu ụwa na-eji mkpali ahụ eme ihe. Ọrụ ahụ nwere usoro nlekota oru nke na-esetịpụ ụfọdụ ntọala dabere na mpaghara ebe obibi gị. Ọnụahịa ndị a ga-egosipụta na ụlọ ahịa Steam, nakwa dị ka nnweta ụfọdụ egwuregwu, dabere na ọnụahịa a setịpụrụ na ntọala mpaghara.
Wepu Steam n'enweghị ehichapụ egwuregwu
Mgbe wepụ Steam site na komputa gị, ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe nsogbu na-atụghị anya ya - egwuregwu niile agakwaghị na kọmputa. Ịkwesịrị ịwụnye egwuregwu niile ọzọ, nke a nwere ike iwe karịa otu ụbọchị ma ọ bụrụ na egwuregwu dị iche iche na ebe nchekwa. Iji zere nsogbu a, ị ga-ewepụ Steam n'ụzọ zuru ezu na kọmputa gị.
Iweghachite ntanetị ego
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ Steam bụ usoro dị nchebe, e nwekwara ihe nkwekọrịta na ngwanrọ kọmputa na ohere nke nyocha site na iji ngwa ngwa, ma mgbe ụfọdụ, ndị omempụ na-achịkwa iji nweta akaụntụ ndị ọrụ. N'okwu a, onye nwe akaụntụ nwere ike ịnweta ọtụtụ nsogbu mgbe ị na-abanye akaụntụ gị.
Esi eme ka akaụntụ Steam rụọ ọrụ?
Ozugbo ị mepụtara akaụntụ na steam, a ga-agwa gị na ịkwesịrị ịmepe akaụntụ gị. Mana ọ bụghị onye ọrụ ọ bụla, karịsịa onye mbido, maara otú e si eme ya. Ya mere, anyi kpebiri iweputa okwu a n'isiokwu a. Esi eme ka akaụntụ Steam rụọ ọrụ? Ya mere, esi ewepụ ihe mgbochi ahụ? Dị mfe. Ịkwesịrị iji ọnụ ọgụgụ dịkarịa ala $ 5 na-azụ ahịa.
Steam na-enye ohere zuru oke iji melite akaụntụ onye ọrụ, interface ngwa, wdg. N'iji ntọala Steam ị nwere ike ịhazi mpaghara egwuregwu a maka mkpa gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịtọpụta ihe a maka ibe gị: ihe ga-egosipụta na ya maka ndị ọrụ ndị ọzọ. I nwekwara ike ịhazi ụzọ iji kwurịta okwu na Steam; họrọ ma ọ ga-agwa gị ozi ọhụrụ na Steam na ụda olu, ma ọ bụ na ọ ga-abụ oke ụda.
Iji achọọ ndebanye aha akaụntụ Steam achọrọ. Nke a dị mkpa ka o wee nwee ike ịhapụ akwụkwọ dị iche iche nke egwuregwu nke ndị ọrụ dị iche iche, data ha, wdg. Steam bụ ụdị netwọk mmekọrịta maka ndị egwuregwu, n'ihi ya onye ọ bụla chọrọ profaịlụ ha ebe a, dị ka VKontakte ma ọ bụ Facebook. Gụọ na iji mụta otu esi emepụta akaụntụ na Steam.
Olee otú iji wụnye egwuregwu na Steam?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata egwuregwu ahụ na Steam, ma ọ na-atụ ọtụtụ ihe, a ga-ebudata ya maka ogologo oge, ya bụ, ụzọ. Ịnwere ike ibudata egwuregwu ahụ site na iji ego ndị ọzọ ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, jiri windo flash iji nyefe egwuregwu ahụ site na kọmputa enyi gị na nke gị. Ma ugbu a, olee otú iji wụnye ya na Steam? Ebee ka egwuregwu arụnyere na Steam?
https://termotools.com ig.termotools.com © Steam 2020